Kamudzira Checkweigher CMC-800 - China denderedzwa rechiedza Pharmatech Co., Ltd
In pagadzirwe capsules, nokufamba Kamudzira zviyereso kazhinji dzinoitika pasi rudo kwevanhu, muchina, zvinhu, nzira uye zvakatipoteredza. Vamwe capsules vari kubva kwaasingasvikiri kutaura refu ngozi pamusoro Unhu zvaifanira kuonekwa se "zvinhu zvine ngozi." Mabatirwo vakawanda ngozi zvigadzirwa anogara nemusoro kuti unhu kudzora dhipatimendi uye kugadzirwa dhipatimendi.
Zvichakadai, kushanda kushanda kuti CMC dzinogona akawedzera zvikuru wayo okusika anoshanda muoti - "extendable chikwata Chimiro" uye "mapfumo yakafanana kubatana". Saka, unogona kuva revatema chero Kamudzira zvekupfakira muchina kuyera ose Kamudzira kubva kugadzirwa.
400 capsules / Maminitsi
800 capsules / Maminitsi
1200 capsules / Maminitsi
N * 400 capsules / Maminitsi
Zvinoshanda Kamudzira Size
Previous: Kamudzira Checkweigher CMC-1200
Next: Empty Kamudzira Sorter
Nomazvo Kamudzira Kusarudza
Automatic Kamudzira Classifying Machine
Kamudzira Inspection mudziyo
Kamudzira Inspection Machine
Kamudzira Quality Control
Kamudzira Sorting Machine
Kamudzira Kuwana Machine
Kamudzira Weight checkered
Kamudzira Weight Checking Machine
Kamudzira Weight Control
Kamudzira Weight Inspection
High nemazvo Kamudzira Checkweigher
High Speed ​​Kamudzira Checkweigher
Industry-Mukusarudza Kamudzira Checkweigher
Pharmaceutical Kamudzira Equipment
Pharmaceutical Kamudzira Machine